November 12, 2019 - Hargeele - Wararka Somali State
Trial opens for man accused in beating death of Somali cab driver – Pittsburgh Post-Gazette
Somali News November 12, 2019
Trial opens for man accused in beating death of Somali cab driver Pittsburgh Post-GazetteSii akhriso
Cayaaraha November 12, 2019
(Liverpool) 12 Nof 2019. Daafaha reer Holland iyo kooxda Liverpool ee Virgil van Dijk ayaa aaminsan in la joogo waqtigii uu daafac ku guuleyan lahaa abaal-marinta Ballon d’Or ee maahan xiddig khadka dhexe ama weerarka ka ciyaara. Liiska 30-ka ciyaaryahan u sharaxan ku guuleysiga abaal-marinta Ballon d’Or 2019 oo ay haacisay majalada France Football ayaa […]Sii akhriso
(England) 12 Nof 2019. Shabakada caanka ah ee “ESPN” ayaa ku shaacisay boggeeda rasmiga ah baraha bulshada ee Twitter-ka tirakoob aad u xiiso badan ee ku saabsan kooxaha sameeyay fursadaha ugu badan horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan. Liverpool ayaa hogaanka u heysa miiska kala sareynta Premier League xilli ciyaareedkan 34 dhibcood, waxayna 9 dhibcood ka sareeyaan Sii akhriso
Soomaaliya November 12, 2019
Paris (SONNA)-Wasiirka wasaaradda waxbarashada, Hiddaha iyo tacliinta Sare ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Cabdullahi Goodax Barre ayaa Magaalada Paris ee dalka Faransiiska waxa ugu qeyb-galay shirweyne labadii sano mar ka dhaca xarunta Ururka UNESCO. Wasiirka waxbarashada mudane Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay in shirkani ahmiyad gaar ah u leeyahay bahda Sii akhriso
(Liverpool) 12 Nof 2019. Kooxda Liverpool ee uu hoggaaminayo macalinka reer Germany ee Jürgen Klopp ayuu u soo yeeray war aan fiicnayn, kaddib markii uu dhaawac soo gaaray mid ka mid ah xiddigaheeda ugu muhiimsan. Xulka qaranka Scotland ayaa wuxuu si rasmi ah ugu dhawaaqay in Kabtankooda ahna daafaca kooxda Liverpool ee Andrew Robertson laga saaray […]Sii akhriso
Paris (SONNA), Talaado, Nofeembar 12, 2019—Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa ka qayb galay kulanka sanadlaha ah ee madasha nabadda Paris oo galay maalintiisii labaad. Mudane Xasan Cali Khayre ayaa dood looga hadlayay gaaridda hadafyada horumarka waara ee 2030, ka caddeeyay inay muhiim tahay in la qiimeeyo dhammaan xaaladaha Sii akhriso
Dowladda FS oo war ka soo saartay xaaladihii ugu dambeeyey ee fatahaadaha
Muqdisho(SONNA) Dowladda Federaalka Soomaaliya, waxay shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ku war-gelinaysaa in fatahaadihii Webiyada Jubba iyo Shabeelle oo hoos u dhac ku yimid, hadii roobab yimaadana weli cabsida fatahadaha meelaha qaar wey jirtaa. Halkan hoose ka akhriso: warsaxaafadeedka ay xaaladihii ugu dambeeyey ee fatahaadaha ay ka soo saartay Dowladda Sii akhriso
(Barcelona) 12 Nof 2019. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa maanta oo Talaado ah shaaca kaga qaaday website-keeda heerka uu gaarsiisan yahay dhaawaca soo gaaray Ivan Rakitić. Ivan Rakitić.ayaa maanta ka dhaqaaqay xerada tababarka ee xulka qaranka Croatia, wuxuuna dib ugu soo laabtay magaalada Barcelona si uu u helo daaweyn, wuxuuna seegi doonaa kulanka Slovakia ee […]Sii akhriso
Muqdisho (SONNA)- Dowladda Soomaaliya iyo mashruuca horumarinta ee Qaramada Midoobay (UNDP) ayaa maanta billaabay mashruuca la qabsiga cimilada oo gacan ka geysanaya in bulshada miyiga ku nool ay helaan biya ku filan. Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka dalka ahna ku simaha Ra’iisul Wasaaraha, mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) iyo wakiilka UNDP ee Soomaaliya, Jocelyn Mason Sii akhriso
Wakaalada dabagalka Daawooyinka oo haw galo bilodey.
DDS November 12, 2019
Wakaalada dabagalka daawooyinka,cuntada iyo adeega caafimadka DDS ayaa 6da maamul magaalo ee deegaanka ka bilawday hawlo lagu xaqiijinayo tayada dawooyinka, cuntada ,iyo adeegyada kale ee aas-aasiga u ah nolosha dadka. Koox isku dhaf ah oo ka kooban khabiirada iyo agaasinada waaxyaha kala duwan ee wakaalada daawooyinka, cuntada iyo adeega caafimaadka ayaa hawlo shaqo ka Sii akhriso